डा जनार्दन पन्थी भन्छन् – एक दिन म राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा फर्कन्छुु — Chetana Online
तत्कालिन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भए लगत्तै त्यहाँका निमित्त मेस ुडा. जनार्दन पन्थी राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सरुवा भएर गए । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरबृद्धिका लागि निकै मेहनत गरेका पन्थी अहिले सबैबाट पाखा लागेका जस्ता भएका छन् । उनलाई कतिपयले शक्ति केन्द्रको पछि लागेर राजनीति गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउँछन् । पन्थीसँग चेतना अनलाइनका सम्पादक पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानि ।
आजभोली के गर्दै हुनुुहुन्छ ?
आजभोली म राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा कार्यरत छु ।
तपाई यो पेशामा संलग्न हुनुुभएको कति वर्ष भयो ?
म यो पेशमा संलग्न भएको करिव तीन दशक भएको छ । म २०४५ साल देखि स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेको हुँ ।
यो पेशामा लागेर तपाईले के पाउनुुभयो ?
म यो पेशामा लागेर सबैभन्दा ठूलो आत्म सन्तुुष्टि प्राप्त गरे । शास्त्रले पनि बैद्य पेशालाई निकै राम्रो सेवा मानिन्छ । म मेरो पेशाप्रति पूर्ण सन्तुुष्ट छु ।
नेपालमा धेरै डाक्टरहरु हुनुुहुन्छ । तर, थोरै डाक्टरहरुको नाम चर्चामा आउने गर्छ । दाङमा तपाई अलि बढी चर्चामा आउनुुहुन्छ किन होला ?
घोराहीको साविक महेन्द्र अस्पताल यहाँका विभिन्न व्यक्तित्वहरुको पहलमा बनेको हो । टेकनाथ गौतम, खगराज लोहोनी, भरतमणी शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ र हाम्रा बुवाहरुको योगदान थियो ।
त्यो अस्पतालप्रति स्वभाविक रुपमा हाम्रो माया हो । यो अस्पताल सुुधार गर्नका लागि मैले लामो समय नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको हुँ । नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दा खेरी मान्छेहरुले स्वभाविक रुपमा चर्चा परिचर्चा गर्छन् । यसलाई म स्वभाविक ठान्दछु ।
धेरैले तपाईलाई डाक्टरको रुपमा भन्दा पनि नेताको रुपमा बुुझ्छन् । तपाई अलि बढी राजनीतिक खेलाडी पनि हुुनुुहुन्छ । नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि निकै रोचक खेल खेल्नुुहुन्छ रे हैन ?
म नेता त होइन । मान्छेहरुले नबुुझेर हो । मैले राजनीति गरेको छैन । तर, कुनै पनि सस्थाको नेतृत्व गरिसकेपछि सबै नेता कहाँ समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा मलाई अरुले नेता जस्तो देखेका हुुन् । उनीहरुको दृष्टिको भ्रम हो ।
राजनीतिकै कुुरा गर्ने हो भने म कट्टुको इजरा बाध्ने बेला देखि नेताको प्रचार हिडेको हो । म मा राजनीतिक सस्कार छ तर, म अहिले राजनीतिकर्मी होइन ।
जनार्दन पन्थी पावरको एक्ससाईज गर्ने राजनीतिक खेलाडी नै हो भन्छन् त धेरैले ।
म कुनै पनि पावर अथवा शक्ति केन्द्रमा कहिले पनि धाएन । जो जो व्यक्ति पावरमा थिए । आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा कहिले कोसँग कहिले कोसँग नजिक हुुन सकिन्छ ।
कुनै पनि काम गर्ने क्रममा समन्वय गर्दा पावर सेन्टरमा धाउनुुपर्ने हुन्छ । यो स्वभाविक प्रकृया हो । त्यसो भएको कारण उहाँहरुले भन्नुुभएको होला । आजको दिनमा म इमान्दारी पूर्वक भनिरहेको छु । मलाई कुनै शक्ति केन्द्र चाहिएको छैन । म अहिले जुन पोष्टमा छुु ।
बकाइदा लोकसेवाबाट पास गरेर आएको हो । भविष्यमा पनि जुुन पोष्टमा जान्छुु । लोक सेवाबाट जाने हो । मेरो कार्यक्षमतामा चित्त बुुझाउनेहरु मलाई आँफै नै खोज्छन् । म नेताको पछिा लाग्ने मान्छे होइन । मेरो बृद्धि विकासका लागि मलाई पावर सेन्टरको कुनै आवश्यकता छैन ।
साविकको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरबृद्धिका लागि तपाईले निकै योगदान गर्नुभयो । तपाईले यसकालागि निकै संघर्ष पनि गर्नुपर्यो । अहिले बनेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तपाईको भूमिकाको औचित्य सकिएको हो ?
परिवर्तन यो संसारको नियम हो । गितामा पनि यो कुरा उल्लेख गरिएको छ । माक्र्सले पनि भन्नुुभएको छ परिवर्तन सांसारिक नियम हो । हिजो हाम्रो आवश्यकता थियो । हामी रहँदा इमान्तिपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेयौं । अहिले अर्को आउनुुभएको छ । उहाँले पनि योगदान दिनुुहुने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हाम्रो भूमिका समयले माग्ने हो । हामीले मागेर हिड्ने होइन ।
भनेपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनार्दन पन्थीलाई माग्यो भने के हुुन्छ ?
जहाँ मेरो भूमिकाको खोजि हुन्छ त्यहाँ म खडा हुुन्छु । यसमा कुसैले दुुबिधा मान्नुुपर्ने कारण नै छैन नि । मैले छोड्दा खेरी पनि भनेको छुु । म एक दिन अवष्य फर्किने छु । तर, यहिँ अबस्थामा म फर्केर आउने भन्ने होइन ।
मन्त्रालयको दरवन्दि अन्तर्गत सरकारले मलाई पठायो भने म नआउने कुुरै छैन नि । म पहिले देखिनै सरकारले जहाँ पठाउँछ त्यहाँ सेवा गर्दै आएको छु । हामी सरकारी प्रतिष्ठानको पक्षमा छौं । समयले एकदिन बोलाउँछ । म फर्कन्छुु ।
तपाईले साविकको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरबृद्धिका लागि ठूलै गुुरुयोजना बनाउनुुभएको थियो । त्यो गुुरुयोजना त डस्टविनमा गयो होला है ?
समयले त्यसलाई डस्टविनमा फालेको जस्तो देखाएको छ । त्यो गुुरुयोजना निकै बैज्ञानीक छ । हाम्रा स्थानीयहरुले नै त्यो मनन् गर्न सक्नुुभएन भने त्यो अवष्य डस्टविनमा जान्छ नै । हामीले दुुई किसिमले गुुरुयोजना बनाएका थियौं ।
हामी के कुुरामा प्रष्ट हुुन जरुरी छ भने सरकारको बजेटबाट आउने मास्टरप्लान र दाताहरुबाट आउने बजेटको मास्टरप्लान । हामीले ५ सय वेड अटाउने, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र सवारीसाधनको पार्किङकालागि मास्टर प्लान बनाएका थियौं । त्यहाँ रहेका सुुकुम्वासीहरुलाई उचित ठाउँमा व्यवास्थापन गरेर अगाडी बढ्ने गरी काम भएको थियो ।
हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्मााणका लागि स्थान समेत खोजि गरिसकेका थियौं । त्यहाँ भौतिक संरचनाको काम गर्नका लागि दाताको आवश्यकता पर्दथ्यो । दाता खोज्ने क्रममा म शंकर पोखरेल कहाँ पनि गएको हो । कृष्णबहादुर महरा कहाँ पनि गएको हुुँ । खुमबहादुुर खड्का कहाँ पनि गएको हुँ ।
तपाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा निर्देशक बन्न खोज्नुुभएको थियो रे । तर, नपाए पछि असन्तुुष्ट हुुनुुभएको हो भन्छन् त बजारमा ?
यो हल्लै हल्लामा चल्ने देश हो । जनार्दन पन्थी पदको पछि होइन कामको पछि लाग्ने मान्छे हो । म घोराहीमा जन्मे । घोराहीमा हुुर्के । समाजका लागि केही हदसम्म राम्रै प्रगति गरेको देखियो । तर, यहिँ समाजमा मेरो सकरात्मक पक्ष नचाहने मान्छेहरु पनि छन् । त्यस्ता दुुई÷चार जना सामन्ती, फटाहहरुले मलाई चरित्र हत्या गर्न खोजेका हुुन् ।
मैले पहिले देखि नै भन्दै आएको छु । नेपाल सरकारले दिएको कुनै पनि जिम्मेवारीबाट पछि हट्नेवाला छैन । मैले मागेर कुुनै पद लिदैन । प्रतिष्ठानको निर्देशक मेरा लागि कुुनै ठूलो कुरा होइन । बाँकी उपकुलपतीका लागि म योग्य छैन । रेक्ट र डिन म हुुने कुरै भएन । रजिष्टार त्यो प्रशासनिक पद मलाई चलाउने मन नै छैन । म चलाउन पनि चलाउने छैन । तर, मलाई यहाँका सर्वदलिय, सर्वपक्षिय मिलेर दिए पनि म ती पदमा जानेवाला छैन । एउटा जावो निर्देशक पदका लागि म किन मरिहत्ते गर्छुु ।
मैले अहिले पनि भन्दै आएको छु । मन्त्रालयले कुनै जिम्मेवारी दियो भने जुुनसुुकै जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छु । म सक्षम पनि छु । मैले यस अघि गरेर पनि देखाएको छु । म मागेर कुुनै पनि पदमा जानेवाला छैन र जादैन पनि । यसमा कोही पनि व्यक्ति भ्रममा नपरे हुुन्छ । मलाई मन्त्रालयले दिएछ भने त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिदैन ।